Tao Bangladesh, Niteraka Lohatenim-Baovao Maro Ny Tahotry Ny Olona Ka Lasa Nifanesisesy Ny Famonoana Bibilava · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2017 5:19 GMT
Andro iraisam-pirenena manerantany natokana ho an’ ny bibilava ny faha 16 jolay, andro iray natao hankalazana ny fisian'ireo biby mandady rehetra ary koa hahatonga saina ny tsirairay amin'ny fiarovana azy ireny. Tena mila fikarakaràna na dia kely fotsiny aza ny bibilava ao an-tanànan'i Bengladesh, satria araka ny tatitry ny media dia nihanitombo ny famonoana bibilava tany amin'ny faritra avaratra-atsinanana sy atsimo-atsinanan'io Firenena io vokatry ny tahotry ny mponina an'io biby io ary indrindra indrindra koa ny tsy fahampian'ireo mpamonjy voina matihanina manana traikefa manokana amin'io ao anatin'ireo mpikambana amin'ny governemanta eo an-toerana.
Vao haingana kely no nahitàna fitomboan'ny bibilava any amin'ireo faritra ireo, ka nahatonga ny lohatenim-baovao toy ny hoe: “kôbra miisa 12 hita tany anatinà trano fivarotana hanimasaka tonga dia vonona”, “Nahitàna kôbra miisa125 tanatina lava-bibilava tao amin'ny lakozia iray tao Rajshahi”, ary koa “kobra miisa 116 no hita tao Kushtia”. Matetika, tsy manan-tsafidy afatsy ny mamono ireny bibilava ireny ny mponina eny amin'ny faritra ambanivohitra rehefa mahita azy ireny ao an-tranony na any amin'ny trano hafa.
Nitombo ihany koa ny isan'ny kaikitry ny bibilava, ary araka ny tatitra voaray dia tsy manaiky ny hiasa any an-tanimbary ireo mpamboly sasany eo an-toerana izay mipetraka eny amin'ny faritra ambanivohitra satria niakatra ny isan'ny kaikitra bibilava. Nisy fikambanana iray nanolotra an-tsitrapo kiraro fingotra maromaro anaovan’ ireo mpamboly mba hahalefilefy ny tahotr'izy ireo.
Hoy Dokotera Monirul H Khan, izay profesora mpifarimbona amin'ny sampana Haibiby ao amin'ny anjerimanontolon'i Jahangirnagar tao amin'ny resadresaka natao niaraka tamin'i Dhaka Tribune : Efa fantatsika hatramin'izay hoe matoa tia mitoetra eny akaikin'ny trano fonenan'ny olombelona ny bibilava dia satria betsaka voalavo hita eny akaikin'ny trano. Ankoatr'izay, amin'ny fotoanan'ny fahavaratra no mikotrika ny bibilava, ka tsy mahagaga raha matetika betsaka amin'izy ireny ny olona. Afaka mikotrika atody miisa 50 avy ny bibilava tsirairay, ka namonoan'ny olona zanaka bibilava maro io famonoana bibilava izay hita tato ho ato io
Araka ny nambaran'ny manam-pahaizana, maro ireo bibilava misy poizina no nifindra monina avy any India mpiray vodirindrina nankany Bengladesh vokatry ny tondradrano mahery, taona vitsivitsy lasa izay, ary miafina any an-tranon'olona izy ireo, indrindra moa fa ireny trano fonenan'ny olona izay naorina tamin'ny fotaka sy ‘bamboo’ ireny. Nangataka famatsiana fanafody mismisy kokoa hiadiana amin'ny poizina bibilava ireo hopitalim-panjakana teo an-toerana nohon'ny fiakaran'ny isan'ny kaikitryny bibilava, fa tsy mbola nisy kosa aloha ny aina nafoy voatatitra vokatr'io kaikitry ny bibilava io.
Ny marina dia tsy misy poizina ny ankamaroan'ny karazana bibilava ao Bengladesh, ary araka ny fampahatsiahivana nataon'i Mohammad Quamruzzaman Babu , filoha sady mpikambana mpanorina ny Vondrona Miaro ny Biby Mikarenjy tao Bengladesh, dia manampy amin'ny fambolena ireo bibilava noho izy ireo manena ny fisian'ireo voalavo mpihinana voly, ary hisy fikorontanana ny firafitry ny tontolo iainana raha mihena ny taranaky ny bibilava.
Sary nalaina tao amin'ny takelaka Facebook “Bibilavan'i Bangladesh”
Zarain'ny takelaka Facebook Bibilavan'i Bangladesh, mpiaro ny bibilava sy mpanao fanentanana ny lahatsoratra iray izay nosoratan'i Abdur Razzaque, mpikaroka ao amin'ny anjerimanontolon'i Dhaka, miresaka ny antony hamonoan'ny olona ny bibilava:
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, maro ny tatitra voavaky momba famonoana bibilava maherin'ny 400 tany amin'ny distrika maro samihafa. Indrisy, tsy mivaona amin'ny efa mahazatra izany. Mamono bibilava an'arivony isantaona ny mponina eto amin'ny firenentsika. […] Misy karazany 90 no mihoatra ny bibilava eto amintsika ary 27 amin'izy ireo ihany no misy poizina. Fa ho an'ny olon-drehetra dia biby mampatahotra ny bibilava na misy poizina na tsia. […] Toy ny efa mandeha ho azy ao anatintsika hatrany am-boalohany hoe mila vonoina ireny bibilava ireny rehefa mahatazana azy ireny isika mba hiarovana ny tenantsika sy ny fianakaviantsika. Matahotra mafy an'io biby io ny olombelona. Sa ve hoe mendrika ny hiaina izy ireny? Milaza mantsy ny siansa fa zava-dehibe eo amin'ny firindran'ny tontolo iainana ny bibilava, ary miasa ho toy ny mpandringana bibikely amin'ny fomba voajanahary izy ireo. […]
Simbàn'ny olombelona noho ny filàny manokana ny toeram-ponenana voajanaharin'ny bibilava. Mihabetsaka isan-taona ireo bibilava maty ary mihamihena ny taranany. […] Amin'ny fotoam-pahavaratra, miditra tsimoramora any an-trano fonenan'ny olombelona izy ireo mba hikotrika sy hitady sakafo. […] Rehefa mahita bibilava mitoetra ao an-tranony ny olona dia inona izany no tokony ataony raha vitsy an'isa ireo mpisambotra bibilava sy mpiaro ny tontolo iainana? Eny fa na dia voavonjy aza ireo bibilava ireo dia tsy misy toerana azo ametrahana azy ireo sady tsy misy olona na dia iray aza mba mandray andraikitra.
Nanolotra sosokevitra i Razzaque hoe afaka hiarovana ireo bibilava ireo ny famoronana vondrona iray mahafatrapo hisambotra bibilava eo an-toerana. Nanao tatitra ny mpikambana iray ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Facebook Borhan Biswas Romon ity:
Nahavita namonjy aina zanaka kobra mahafatifaty kely miisa 17 sy reniny anankiray (Spectaled Cobra – Cobra Indiana) tany an-tranon'olona tao Poba Rajshahi izahay androany.
Ankizy milalao zanaka bibilava voasambotra. Sary nalaina tao amin'ny Flickr-n'i Vipez. CC: BY-NC-ND 2.0
Tao anatina lahatsoratra iray tao amin'ny vohikala Facebook, nizara ny ahiahiny momba ny famonoana bibilava i Shahriar Alam, Minisitry ny governemanta misahana ny raharaham-bahiny:
Tsy mandry ny saiko satria maro ireo bibilava no maty tato anatin'ny herinandro vitsivitsy tany amin'ny faritra samihafa eto amin'ny firenena, anisan'izany ny ao Rajshahi. Nazoto nanaparitaka ny vaovao mihitsy ny haino aman-jery mahazatra. Ka lasa nitarika ny olona ho liana amin'ny famonoana ireny biby ireny izany. Kanefa, tsy mbola nisy nahenoina tatitra mombanà olona matin'ireny bibilava ireny. Ary mbola mitohy hatrany ny famonoana an-jambany azy ireny. […]
Mitehiriza asidra fantatra amin'ny anarana hoe ‘acide phénique’ (mba ho fanakanana ny fidiran'izy ireo) ao an-trano raha mieritreritra ianao hoe mety ahitan-doza ny bibilava. Sambory izy ireo (miaraka amin'ny fanampian'ireny mpisambotra bibilava amin'ny alalan'ny fanadalàna azy ireny) raha toa ka olana ny fipetrahan'ny bibilava ao an-trano, ary raiso dia atero any anaty ala na any amin'ny sampana misahana ny haibiby. Fa aza mamorona olana vaovao amin'ny alalan'ny famonoanareo azy ireny.